How to auto share from WP to G+? — MYSTERY ZILLION
How to auto share from WP to G+?
ကျွန်တော် wordpress မှာပိုစ်တင်ပြီးတိုင်း Google+ and Facebook မှာ အလိုလို share ပြီးသားဖြစ်ချင်လို့ပါ.နည်းလမ်းများရှိရင် ပြောပေးပါလား..
wordpress မှာ post တင်ပီးတိုင်း facebook က ကိုယ့်ရဲ့ wall နဲ့ page မှာ auto တင်ပီးသားဖြစ်ဖို့တော့ ရပါတယ်.. https://www.facebook.com/networkedblogs ကိုသုံးလိုက်ပါ။ ကျနော်လည်း ကျနော့ wordpress ကို အဲ့ဒါနဲ့ပဲ သုံးထားတာပါ။
Google + အတွက် အဲ့လိုမျိုးရှိလား၊